Hay’ada NISA oo sheegtay in howlgal qorsheysan ku soo qabatay xubno ka tirsan Shabaab… – Hagaag.com
Hay’ada NISA oo sheegtay in howlgal qorsheysan ku soo qabatay xubno ka tirsan Shabaab…
Hay’adda Nabad Suggida Somaliya ayaa sheegtay howlgal qorsheysan oo ciidamada NISA ay ka fuliyeen Muqdisho in lagu soo qabtay xubno ka tirsan Shabaab.
Howlgalka oo aan la sheegin xaafada sida rasmiga ah looga sameeyay, ayaa NISA qoraalkeeda waxa ay ku sheegtay in ciidamada ammaanka ay soo qabten xubno Shabaab ah oo maleegaayay fulinta qaraxyo iyo dilal qorsheysan.
“7da Sabtembar, howlgal ayaa ciidanka amnigu ku soo qabteen koox Al-Shabaab ah oo ku howlanaa dilal iyo weeraro qorshaysan oo ay magaalada Muqdisho ka fuliyaan, Ciidanka amnigu waxay naftooda u huraan soo qabashada argagixisada ah ayagoo khatar ku ah shacabka.” ayaa lagu yiri qoraalka NISA.
NISA ayaa horay sidan oo kale u shaacisey inay qabteen xubno ka mid ah Al-shabaab oo ka shaqeynaayey amni darri ka dhacda magaalada Muqdisho.
Muddooyinkaan dambe Hay’adda Nabad Suggida Somaliya ayaa bilowday inay qoraalo kooban ku baahiso Barta Twitterka ee Hay’adda, kaasi oo lagu sheegayo in rag Shabaab ah la soo qabtay, balse aanan la ogeyn cadeyntooda rasmiga ah.